फेरि माओवादी र एमालेबिच एकता ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
फेरि माओवादी र एमालेबिच एकता !
चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फेरि पनि मिलेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएकी छन्।
केही महिनाअघि मात्रै नेकपा विभाजन गरी पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा सक्रिय भएका दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजदूत होउले फेरि मिल्न सुझाव दिएकी हुन्।
मंगलबार नेपाल डायलग फोरमले भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको छलफलमा राजदूत होउले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम लिएर भनिन्, ‘नेपाली जनताको आर्थिक विकासको आकांक्षा पुरा गर्न तपाईंहरु मिल्न आवश्यक छ।’
यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गराउन र कम्युनिस्ट सरकार बनाउन चीन सक्रिय भएको आरोप लागेको थियो। नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डबीच द्वन्द्व बढिरहेका बेला राजदूत यान्छीले शक्ति बाँडफाँड गरेर सरकार र पार्टी एकता जोगाउन सुझाव दिएकी थिइन्।
एमाले र माओवादी केन्द्र बेग्लाबेग्लै सक्रिय भएपछि चीनको तर्फबाट पुनः मिलेर अगाडि बढ्न सार्वजनिक रुपमा सुक्राव आएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो।
चिनियाँ राजदूत सहभागी भएको यो कार्यक्रममा ओली र प्रचण्ड भने सहभागी थिएनन्। एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवाली र माओवादीका नेता शक्ति बस्नेतले कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै स्थापना भएको एक सय वर्षमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको प्रगती र नेपाल–चीन सम्बन्धबारे चर्चा गरे।
एमाले र माओवादीका नेता–कार्यकर्ता सहभागी कार्यक्रममा राजदूत होउले नेपाल–चीनबीच पार्टी–पार्टी र नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्ध अझै बलियो बनाउनु पर्ने बताएकी थिइन्।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले एक वर्ष पुरा गरेको उपलक्ष्यमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको शुभकामना सन्देशप्रति उनले धन्यवाद दिइन्।